Accueil > Gazetin'ny nosy > Fanonganam-panjakana : Nosamborina i Sareraka
Fanonganam-panjakana : Nosamborina i Sareraka
Mivoatra dia mivoatra ny raharaha mahakasikaan’ny fikasana hamono ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay tarihin’ny kapitenin’ny zandary Paul Maillot Rafanoharana sy ny kolonely Philippe Marc François izay teratany fantsay avokoa. Ny faha 20 jolay 2021 izy roalahy ireo no voasambotra miaraka amin’ny olona 4 hafa. Atao fanadihadiana amin’ny polisim-pirenena izy ireo. Voalaza fa ny faha 21 jolay 2021 teo izy ireo no nikasa hamono ny filoham-pirenena izao nefa sarona.
Ankehitriny dia mihazakazaka ny raharaha satria ny faran’ny herinandro teo dia nalaina ambavany ihany koa ny jeneraly Ramahatra Victor izay praiminisitra tamin’ny andron’ny fanjakan’i Didier Ratsiraka. Mbola natao fanadihadiana koa tamin’io fotoana io ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand izay PDS tao amin’ ny faritan’Antananarivo tamin’ny fanjakana Ravalomanana Marc. Mbola tamin’ny faran’ny herinandro koa no nalaina ambavany ny orinasa mpitrandraka solika Madagasikara Oil any Melaky. Nanambara ity orinasa ity fa nangataka vola taminy “10 millions euro” tamin’izy ireo ingahy Paul Maillot Rafanoharanaho entina hanogam-panjakana.
Omaly faha 27 jolay 2021 dia fantatra koa izao fa nosamborina tao an-tranony teny Ambohipo tamin’ny 6 ora maraina ingahy Sareraka izay mpamita iraka manokana an’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Nosavana hatramin’ny tranony. Misy koa zandary 11 lahy nosamborina sy anaovana fanadihadiana nanomboka omaly ka ny 4 amin’ireo dia GSIS(groupe de sécurite et d’intervention spéciale).
Voalaza ny loharanom-baovao niely omaly koa fa isan’ny halana am-bavany koa Odon Marie Razanakolona arseveka eto Antananarivo sy Ranjeva Raymond. Voalaza fa maro be ny olona mbola hohadihadiana amin’ity raharaha ity satria nifanerasera tamin’ingahy Maillot Rafanoharana ity. Ingahy Maillot izay voalaza fa nikendry ny toeran’ny praiminisitra amin’izao fanjakana izao.
Mahakasika ny Paul Maillot Rafanoharana ity dia fantatra fa nifanerasera tao amin’ny olona maro izy.Mpanao politika, manampahaizana maro sy mpandraharaha maro ary olona manana ny toerany aram-piarahamonina koa. Ho hitan-tsika ny fivoaran’ity raharaha ity.